पञ्चासे हर्पनडाँडा समाजको वार्षिक भेटघाट, अक्षयकोषका लागि १५६९ पाउन्ड जम्मा
प्रकाश गरुङ -
अल्डरसट । पञ्चासे हर्पनडाँडा समाज युकेको वार्षिक भेटघाट कार्यक्रम गत शनिबार ८ जुलाईका दिन कनट लेजर सेन्टर, अल्डरसट युकेमा भव्यताका साथ सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रमको सुरुआत अध्यक्ष डमर गुरूङ र सिनियर मेम्बर ९० वर्षीय सिङ्गबहादुर गुरुङले दीप प्रज्जवलन गरी गरेका थिए । कार्यक्रममा काखे बालबालिकादेखि ९० वर्षका वृद्धसम्म गरी करिब ३०० जनाको सहभागिता थियो ।
२०१२ सालमा सुरुआत भएको समाजले आफ्नै गाउँघरको स्थानीय क्षेत्रमा धेरै सहयोग पु¥याइरहेको अध्यक्ष डमरकाजी गुरुङले बताए । उनले नेपालमा अक्षयकोष खडा गरी दीनदुखीहरुलाई मद्दत पु¥याउन सकेकोमा समाजलाई गर्व लागेको भन्दै कोषलाई सहयोग निरन्तर मिलिरहेको पनि जानकारी गराए ।
महासचिव प्रकाश गुरुङले भने, ‘प्रायः तमु पहिरनमा उपस्थित जमातलाई देख्दा खुसी त लाग्ने नै भयो तर गाउँघर शून्य पारेर पूर्ण सन्तुष्टि लिन भने सकिँदैन ।’
८०आंै वसन्त पार गरेका वृद्धवृद्धाहरु देवबहादुर गुरूङ, वीरबहादुर गुरूङ र देउकुमारी गुरूङलाई सुस्वास्थ र दीर्घायुको कामना गर्दै खादा लगाइदिइएको थियो । नवविवाहित जोडी सोहित र शुदेस्न गुरूङलाई बधाई दिइएको थियो । शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेका नानीहरुलाई बधाई दिइयो । जस्मा बधाईका पात्रहरु पूजा गुरुङ युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट सिभिल ईन्जिनियरिङमा मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास अनर्स, प्रियता गुरुङ युनिभर्सिटी अफ सरीबाट मास्टर इन म्याथमेटिक्स फस्ट क्लास अनर्स र हरिमाया गुरुङ युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट नर्सिङमा ग्रेजुएसन थिए ।
कार्यक्रममा ससाना नानीहरुका लागि डा. सचिन गुरुङ, लेडिज खेल र राफलमा खुसीमान गुरुङ र डिजे गोपीचन गुरुङ तथा ईन्टरटेनमेन्ट सचिव डिल गुरुङले रमाइलो कविता, साइरी सुनाएर खेल खेलाएर मनोरञ्जन दिलाएका थिए । खुसीमान गुरुङको अयोजनामा विभिन्न नाचहरु प्रस्तुत गरी मनग्गै ताली बटुलेका थिए । कार्यक्रमको खर्चका लागि धेरै जनाले सहयोग गरेका थिए ।
मोनबहादुर गुरुङ ५००, गोपीचन गुरुङ र पुनम गुरुङ ३११, डमरकाजी गुरुङ २००, प्रकाश गुरूङ १००, सन्तोष गुरुङ १००, हुमानसिङ गुरुङ र शोभा गुरुङ १००, तेजु गुरुङ १००, मे. बुद्धि गुरुङ १०० र सफ्ट ड्रिक्स सबै रवी गुरूङ, पानी कृष्ण घले, लेडिज खेल र पिए सिस्टम खुसीमान गुरूङ र दिल गुरूङ, बच्चाहरुको खेल डा. सचिन गुरुङले स्पोनसर गरेका थिए । राफल ड्र का पुरस्कारहरु पनि समाजका सदस्यहरुबाट नै उपलब्ध गराइएको थियो । अक्षयकोषका लागि १५६९ पाउन्ड जम्मा भएको थियो । कार्यक्रम प्रकाश र मनिषाले सञ्चालन गरेका थिए ।